လင်္ကာ: Todesritual … | portal │ပညာရှင် Hans Kottke
« ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ – Volker Pispers: “… မကြာသေးမီက 2014 ခုနှစ်သည်အထိ”
ရေဒီယို Okerwelle အပေါ်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ: ဂျာမနီမှာအကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ »
လင်္ကာ: Todesritual …
Les’ Anzeigen zum Tod nun eher,
Denk’ drüber nach so manchen Tag.
ပညာရှင် Hans hello
Tags:: Kulturen, သေဆုံးခြင်း, Todesritual
This entry was posted on Wednesday, January 7th, 2015 တွင် 20:21 ပညာရှင် Hans Kottke ကအောက်မှာတင်သွင်းသည် 2014, ယခု, ယေဘုယျ, လင်္ကာ. သင်ကတဆင့်ဒီ entry ဆိုတုံ့ပြန်မှုလိုကျလြှောကျနိုငျ RSS ကို 2.0 အစာ. သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ဦးတုန့်ပြန်ထွက်သွား, သို့မဟုတ် trackback သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် site တစ်ခုကနေ.
XHTML က: သင်တို့သည်ဤ tags များကိုသုံးနိုင်သည်:
ဆိုက်ကိုမာတိကာ: ©2015 portal │ပညာရှင် Hans Kottke
Tue Jun 18th 21:55:05 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019